တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့ တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ တရုတျနိုငျငံမှပွနျလညျရောကျရှိ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ထိုငျးနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ့ ကာကှယျရေးနှငျ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာပွပှဲ (Defence & Security 2019) နှငျ့ တရုတျနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျမှုတနျပွနျနှိမျနငျးရေး လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ခနျး ADMM-Plus(VIP Program) မြားသို့ တကျရောကျခဲ့သော တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့ တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေ့လေ့ညျပိုငျးတှငျ တရုတျနိုငျငံ၊ ကှလေ့ငျမွို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှ ပွနျလညျထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစား လှယျအဖှဲ့အား တောငျပိုငျး စဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျမှ လကျထောကျစဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ Major General Chen Mintian နှငျ့အရာ ရှိကွီးမြား၊ တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောဦးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျ နှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျော အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျသို့ပွနျလညျရောကျရှိရာ ဒုတိယတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ မွငျ့မျော၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Chen Hai ၊ တရုတျနိုငျငံကွညျးတပျစဈသံမှူး နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
အဆိုပါ ခရီးစဉျအတှငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ကာကှယျရေးနှငျ့ လုံခွုံရေး ဆိုငျရာပွပှဲ (Defence & Security 2019) နှငျ့ အကွမျးဖကျမှုတနျပွနျနှိမျနငျးရေး လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ခနျး ADMM-Plus(VIP Program)မြားသို့ တကျရောကျခွငျး၊ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွ သညျ့နိုငျငံမြားမှ တပျမတျောအကွီးအကဲမြား၊ တရုတျနိုငျငံနှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံတို့မှ တပျမတျောအကွီးအကဲမြားနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး၊ အထငျကရနရောမြားနှငျ့ စကျမှုလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနမှေုမြားအား လလေ့ာကွညျ့ ရှုခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါသှားကွသော တပျမတျောအရာရှိမြားနှငျ့ အကွမျးဖကျမှုတနျပွနျနှိမျနငျးရေး လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ခနျး ADMM-Plus(VIP Program)တှငျ မွနျမာ့ တပျမတျောကိုယျစားပွုပါဝငျလကေ့ငျြ့ ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြားသညျလညျး ပွနျလညျ လိုကျပါလာခဲ့ ကွသညျ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2019) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်နှိမ်နင်းရေး လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ADMM-Plus(VIP Program) များသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွေ့လင်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား တောင်ပိုင်း စစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ လက်ထောက်စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် Major General Chen Mintian နှင့်အရာ ရှိကြီးများ၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai ၊ တရုတ်နိုင်ငံကြည်းတပ်စစ်သံမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2019) နှင့် အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်နှိမ်နင်းရေး လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ADMM-Plus(VIP Program)များသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြ သည့်နိုင်ငံများမှ တပ်မတော်အကြီးအကဲများ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ တပ်မတော်အကြီးအကဲများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ အထင်ကရနေရာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှုများအား လေ့လာကြည့် ရှုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားကြသော တပ်မတော်အရာရှိများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်နှိမ်နင်းရေး လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ADMM-Plus(VIP Program)တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားပြုပါဝင်လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း ပြန်လည် လိုက်ပါလာခဲ့ ကြသည်။